၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရောင်းဈေးစဖွင့်ချိန် တစ်ကောင် ယန်းသောင်း ၅၀၀ ပေါက်ဈေးရှိခဲ့တဲ့ Snow crab !! - JAPO Japanese News
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရောင်းဈေးစဖွင့်ချိန် တစ်ကောင် ယန်းသောင်း ၅၀၀ ပေါက်ဈေးရှိခဲ့တဲ့ Snow crab !!
သော 13 Nov 2020, 18:57 ညနေ
ဂဏန်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကစားသုံးကြပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာစားကြတဲ့ ဂဏန်းကို Cancer crab လို့သိကြပြီး၊ အာရှနဲ့သြစတြေးလျဘက်မှာတော့ Blue crab မျိုးနွယ်ဂဏန်းကပိုများပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဂဏန်းလို့ပြောလိုက်ရင် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Shanghai crab ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်လောက် ဂဏန်းကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။
Horsehair crab, King crab စတဲ့အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး ဂျပန်အနောက်ဘက်အခြမ်းမှာ Snow crab ဆိုတဲ့ဂဏန်းမျိုးရှိပါသေးတယ်။
ဒီလိုပြောရင် King crab နဲ့ Snow crab ကမတူပါဘူး။ King crab မှာကအဆူးတွေပါပါတယ်။
(ဂဏန်းအမျိုးအစားနာမည်တွေ မြန်မာလို့ခေါ်ရခက်လို့ အင်္ဂလိပ်လို့ရေးတာ သည်းခံပေးပါ)
နှစ်တိုင်း ဂဏန်းရာသီကိုစောင့်ပြီး၊ ၁၁ လပိုင်း ၆ ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးရောင်းဈေးကိုသတ်မှတ်တော့တယ်။ ဒါကြောင့် ၁၁ လပိုင်း ၆ ရက်နေ့ဆိုတာ ဂဏန်းရောင်းဈေးစတင်သတ်မှတ်တဲ့နေ့၊ စတင်ရောင်းချတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Tottori ငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်းမှာတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က Snow crab ပထမဆုံးရောင်းဈေးဟာ ၁ ကောင်ကို ယန်းသောင်း ၅၀၀ ပေါက်ဈေးရှိခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါကိုဈေးကွက်ကစားချိန်လို့ပြောလို့ရပြီး၊ ဒီသတင်းကကမ္ဘာကိုတောင် တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီရောက်လာပြီဆို လူအများစုက Sanin / Hokuriku region ဘက်ကိုလာလည်ကြတယ်။ အကြောင်းကတော့ Snow crab ရရှိတဲ့‌ဒေသမှာ လာပြီးစားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်ကြီးဆိုရင် လုံးပတ်က ၁၄ စင်တီမီတာအထက်ရှိပြီး၊ လက်ချောင်းတွေဖြန့်လိုက်ရင် ၈၀ စင်တီမီတာရှိတဲ့ လှပတဲ့ဂဏန်းတွေပါ။ ခြေချောင်းတွေရဲ့ အဖြူရောင်အသားကအရမ်းချိုပြီး၊ ကိုယ်ထည်တွင်းမှာတော့ လတ်ဆတ်တဲ့ဂဏန်းအဆီအပြည့်ပါ ပါတယ်။ ပြုတ်မလား၊ ကင်မလား၊ ဆာရှိမိနဲ့ တန်ပူရာတွေအပြင် ဒယ်အိုးနဲ့ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ထူးခြားတဲ့အရသာနဲ့ဟင်းချိုကိုရရှိပါတယ်။ သူ့ကိုပြုတ်ပြီးရလာတဲ့ ဟင်းချိုနဲ့ ပြန်ချက်ထားတဲ့ထမင်း 雑炊 Zōsui ကလည်း ဇိမ်ခံအစားအစာလိုပါပဲ။
ဒီအရသာကိုစွဲသွားတဲ့လူတွေက ဂဏန်းစားဖို့ပိုက်ဆံတွေတောင်ကြိုစုထားတတ်ပြီး၊ နှစ်စဥ်ဒီရာသီကိုရောက်လာတာနဲ့ ထွက်တဲ့နေရာအထိဆင်းပြီးစားကြတဲ့ ပုံမှန်ဖောက်သည်တွေတောင်အများကြီး ရှိတယ်ဆိုပဲ…။
မြို့မှာလည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဂဏန်းဟင်းလျာရရှိလာပါတယ်။
အရင်ကတော့ ဂျပန်မြို့ဘက်တွေမှာ ကဏန်းစားလေ့မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ …။
၁၇၀၀ ခုနှစ်လောက်ကနေ ဂျပန်ပင်လယ်မှာ ဂဏန်းတွေဖမ်းမိလာတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ဂဏန်းတွေကကြာကြာအထားမခံလို့မရောင်းချဘဲ၊ ထုတ်ကုန်အနေနဲ့တောင် အသိအမှတ်မပြုခဲ့ဘူးတဲ့။
၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ စစ်ပြီးနောက် တိုင်းပြည်နလန်ထူလာပေမဲ့ “ ဂဏန်းဆိုတာ အဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာအရမ်းပေါလို့ ဘယ်သူမှတောင်အဖက်မလုပ်ဘူး” လို့ တံခါးသည်ဟောင်းတစ်ဦးက သူ့ရဲ့အမှတ်တရကိုပြောပြပါတယ်။
ပြုတ်ပြီးအနီးအနားကရွာမှာလိုက်ရောင်းတဲ့အပြင်၊ စည်သွပ်ဘူးလုပ်တာတို့၊ ကလေးတွေကိုချက်ကျွေးတာတို့၊ စားလို့ကျန်တာကိုတော့ လယ်ယာအတွက်မြေသြဇာလုပ်ရုံအပြင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုကနေ ဂဏန်းကနာမည်ကြီးလာပြီး၊ ဘာကြောင့်ဆောင်းရာသီရဲ့ အရသာမှာ ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ရတာလဲ?
အိုဆာကာ Minami မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ Dotonbori ကိုရောက်ဖြစ်ရင် ဂဏန်းဆိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့ 「かに道楽」” Kani Doraku” ဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုလူတိုင်းသတိပြုမိတတ်ကြတယ်နော်….
အိုဆာကာလို့ပြောလိုက်ရင် ဒီဆိုင်းဘုတ်နဲ့ဆိုင်ရလည်း မပါမဖြစ်ပါဝင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။
ဒီဆိုင်ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ 今津芳雄 Yoshio Imazu ဆိုသူကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အိုဆာကာမှာ ဂဏန်းလို့ပြောလိုက်ရင် စည်သွပ်ဘူးလောက်ပဲရှိပြီး၊ ဂဏန်းအရှင်တွေ့ဖူးသူရော၊ စားဖူးသူရော သိပ်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့…
Imazu ဟာ ၁၉၁၅ ခုနှစ် Hyogo စီရင်စုရဲ့မြောက်ပိုင်း ကဏန်းထွက်တဲ့ဒေသရဲ့ ငါးရောင်းတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့ဒေသမှာပဲရောင်းချနေရင်း ကဏန်းဈေးကိုသိပြီး၊ မြို့ပေါ်ကလူတွေကိုလည်း ရောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခွင့်အရေးရပြီး နှစ် ၆၀ လောက် အိုဆာကာမှာ ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး၊ ငါးနဲ့အတူ ပြုတ်ထားတဲ့ကဏန်းကိုလည်း ဟင်းပွဲအနေနဲ့ချပေးပေမဲ့၊ ကဏန်းဟာဆောင်းရာသီလောက်ပဲရတာကြောင့် ဆိုင်ကသိပ်ပြီးနာမည်မရခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒီကနေ ကိုယ်ပိုင်နည်းနဲ့ဖန်တီးမှုတွေလုပ်လာတယ်။ အရင်ဆုံးကဏန်ကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဟင်းပွဲအနေနဲ့ချနိုင်ဖို့စဥ်းစားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန် ရေခဲရိုက်ပုံက ကဏန်းကိုခြောက်သွေ့သွားစေပြီး၊ ဘယ်လိုမှအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ Imazu ဟာ ကဏန်းလတ်ဆက်မှုမပျက်စေတဲ့ ရေခဲရိုက်နည်းကိုစဥ်းစားမိသွားတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ကဏန်းရေခဲတုံး !!
သူဟာစတီးပုံးအကြီးထဲမှာအရေအပြည့်ထည့်ပြီး၊ ကဏန်းအရှင်ကိုထည့်ကာ -30 ဒီဂရီနဲ့အေးခဲစေလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီကဏန်းထည့်ထားတဲ့ ရေခဲတုံးကို truck နဲ့အိုဆာကာဆီသယ်လာတယ်။ ရေခဲသေတ္တာငှားပြီး သိမ်းဆည်းတယ်။ နွေရာသီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ရေခဲတုံးအရေပျော်သွားပြီး ဆိုင်မှာလတ်ဆတ်တဲ့ကဏန်းဟင်းပွဲအဖြစ် ချပေးလို့ရပါပြီ။
နောက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ထွင်ခဲ့တဲ့ 「かにすき」 “ Kanisuki” ဆိုတဲ့ဟင်းလျာကလည်း လူကြိုက်အရမ်းများခဲ့ပြီး၊ ပထမဆုံးစားလိုက်ရတဲ့ ဒီကဏန်းအရသာဟာ အိုဆာကာအစားအသောက်ခုံမင်သူများအတွက် ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိုဆာကာရောက်ဖြစ်ရင် “ Kanisuki” ဟင်းလျာလည်းစားကြည့်ပါအုံးနော် ….
အမျိုးအစားပေါင်း ၂၅၀ အထက်ရွေးချယ်ပြီးရောင်းချတယ်။
ကဏန်များကိုရွေးချယ်ပြီး အမျိုးအစားခွဲတဲ့အခါ အရွယ်အစားနဲ့အလေးချိန်ကိုကြည့်ပါတယ်။ ခြေထောက်တွေကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ၊ အခွံအရောင်၊ နောက်ပြီးအခွံမှာခြစ်ရာရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပါတယ်။
အများဆုံးဖမ်းမိချိန် သင်္ဘောတစ်စီးတည်းမှာပဲ ကဏန်းအကောင်ပေါင်း ၃၀၀၀ နီးပါးရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အရမ်းအေးတဲ့ဆောင်းဦးရာသီအချိန် ငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်းမှာသင်္ဘောသားတွေနဲ့ ၎င်းတို့မိသားစုတွေဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်နေတာကိုမြင်ရရင် ဘာကြောင့်ကဏန်းဈေးကြီးသလဲဆိုတာကို နားလည်သွားမှာပါ။
သင့်တော်သလို ဈေးအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ထားပြီး ကြားနေဝယ်ယူသူတွေကနေတစ်ဆင့် အားလုံးဟာပြန်လည်စားသုံးရပါတယ်။
ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့အားနဲ့ညီမျှတဲ့ Coconut crab ကြောင့် အိပ်မက်ဆိုးမက်ခဲ့ရတဲ့မိသားစု !!!
ဂျပန်မှာ စားလေ့ရှိတဲ့ ကဏန်း
(၉)ရက်နေ့ ကူးစက်လူနာအသစ် တိုကျိုတွင် (၁၅၇) ဦးရှိပြီး၊ ဟိုကိုင်းဒိုးတွင် (၂၀၀) ဦးရှိနေ
ပိုးကောင်မဟုတ်တဲ့ ပိုးကောင် !!!
လေလည်မိခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး !!!!